Ranomasimbe Indianina : rivodoza telo indray mihaodihaody | NewsMada
Ranomasimbe Indianina : rivodoza telo indray mihaodihaody
Mananontanona hanafika an’i Madagasikara ireo rivodoza telo indray miforona ary mifanakaiky ao avaratry ny ranomasimbe Indianina. Io no tatitry ny Meteo France ary naneho ny sary azony amin’ny zanabolana omaly, maraina.
Tsy fahita hatrizay ary vinavinaina ho isan’ny rivodoza haherivaika ireto mihaodihaody any an-dranomasina ireto raha ny fanazavana hatrany. Ahina ny mety hitambaran’ireo rivodoza telo ireo ho lasa rivodoza iray matanjaka raha ny fahitan’ny Meteo France ny fizotran’ny diany ao amin’ny ranomasimbe Indianina ao.
Vinavinaina hitondra rivotra hatrany amin’ny 270 km isan’ora any ity rivodoza ity raha tonga amin’ny fitambarany ho iray. Hitondra ny anarana “Oodama rasen Shuriken” ity andro ratsy ity rehefa hitambatra ary anisan’ny holasibatra ny Nosy Maorisy sy i Madagasikara.
Ankoatra ny rivotra mifofo, hitondra orambe ihany koa ireo andro ratsy ireo.
Efa miomana handefa ny fanairana loza miloko volomboasary sahady ny prefet ao amin’ny Nosy La Réunion amin’ny asabotsy izao, hahafahana mandrindra ny vonjy voina mandritra ny fandalovan’izany rivodoza izany.
Nilaza ny Meteo France fa hiakatra ny renirano satria hikija be sy maharitra ny orana mandritra ny fandalovan’ny rivodoza.